We Fight We Win. -- " More than Media ": သတိထား ကြပါ ပန်းချီကားတွေအစုပြနေတယ်။ ဘယ်သူတွေကို လုပ်ကြံဦးမလဲမသိဘူး။
သတိထား ကြပါ ပန်းချီကားတွေအစုပြနေတယ်။ ဘယ်သူတွေကို လုပ်ကြံဦးမလဲမသိဘူး။
ရန်ကုန်မြို့ နဝဒေး လမ်းက သူ့ ရဲ့ နေအိမ်မှာ နဝဒေး ပန်းချီ ပြခန်း၊ နဝဒေး အမှတ် တရ ပ စ္စည်း ကော် နာ
နဲ့ ကော်ဖီကော်နာ တို့ကို မေလ ၁၁ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
ဘုရား တည်တယ်ဆိုပြီး ထွက်လာပြီးကတည်း မူစလင်တွေကို သတ်လိုက်တာ။ အခု ပန်းချီ ကားတွေ စုနေပြန်ပြီဆိုတော့ ဘယ်သူ ကို သတ်ဖို့ ကြံဦး မလဲ မသိဘူး။ သတိထားမှ တော်ကာကြမယ်။
ဂျာမန် ဗိုလ်ချုပ်ဟင်းနရစ်ဟင်းမလား လဲ ပန်းချီကားတွေ စု သတဲ့လေ။ ဥရောပကို နာဇီတွေ ကျးကျော်တုံးက ဟင်းနရစ်ဟင်းမလား က ပန်းချီကားတွေ အချောင်ဈေးနဲ့ ဝယ်ပြီး စုဆောင်ခဲ့တာကမ္ဘာကျော်တယ်လေ။
KHIN NYUN,MILITARY GANGSTER
YOU DARE TO SHOWE YOUR FACE TO PUBLIC.
YOU HAVE CONDUCTED UNCOUNTABLE CRIMINALS TO CITIZENS DURING 50 YEARS, FOLLOWING THE WAY OF YOUR
FIRST HAND TEACHER,JUNTA,NE WIN
မိုသီး ခုဆိုရင်‌ ခင်‌ညွန့်‌မှာ ကိုယ်‌ရံ‌တော်‌တပ်‌
သန်း‌ရွှေမှာလဲ ကျီးနဲ့ဖုတ်‌ဖုတ်‌ ဖြစ်‌‌နေပြီ၊
If Than Shwe is no.1 enemy, khin nyunt is also no. 1A enemy. We cannot ignore his crime, he managed to kill most of students, politicians and NLD MPs during his is chief of Military Intelligence. Myanmar public will never forgive him. Whatever he does,we cannot appreciate him.